'एमसीसी विवाद, नेकपा र समाजवाद' - मदन खड्का - Kantipath.com
नेपाली राजनीतिमा हरेक तीन महिनामा एक न एक तरंग चलिरहन्छ। कुनै न कुनै नयाँ विषयले बजार छाई रहन्छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय बजार तातेको एउटा महत्वपूर्ण विषय हो अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)द्धारा उपलब्ध गराउने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगको विषय। नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । जति देशमा एमसिसी सहयोग पाउँछन् सबैतिर संसदीय अनुमोदन त्यसको एक महत्पूर्ण सर्त रहेको छ। ईन्डोनेसिया बाहेकको विश्वका सबै देशले संसदीय अनुमोदन त्यसको पहिलो सर्त हो। त्यसको सिधा अर्थ हो जनअनुमोदन।
सन् २००४ जनवरी २३ तारिकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्थापना भएको थियो। विश्वका गरिब देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक समाजिक विकास गराउन तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा यसको सुरुवात भएको हो।
अमेरिकी सरकारले विश्वभर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, समातामुलक समाज निर्माण, भ्रष्टाचार निवारण, जनताको सूचनाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत प्रशारण लाईनको विकास, आर्थिक विकास, जमिनको सदुपयोग र अधिकार, सडक सन्जाल निर्माण, खाने पानीलगायत विषयमा विश्वभर ७७ देशमा १३ विलियन भन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ। दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशले यो सहयोग पाईरहेका छन्। यो सहयोग पाउनका लागि लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित सर्त निश्चित मापदण्ड पास गर्नु पर्ने हुन्छ।
पछिल्ला दिनहरुमा चिनियाँ पक्षसंग नजिकिने होडबाजी चल्नु र अमेरिकासंग पाएको सहयोग पनि अनेक बहानाबाजी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न खोज्नु नेपाली भौगोलिक सन्र्दभ र कुटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय हो। अमेरिकाले झण्डै एक दशकपछि अघिल्लो डिसेम्बर १८ तारिकमा नेपालको परराष्ट्रस्तरीय भेट गराएर सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजेको सन्देश दियो तर नेपाल सरकार एक पछि अर्को गर्दै कुटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो थप अराजक बन्दै गएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्दछ। यसको मुल जड कुटनीतिक मर्म अनुसार मुलुक नचल्नु नै हो।
दुनियाँमा अहिलेसम्म समाजवादबारे अनेक विचार विकास भएका छन् । अनेक थरी अभ्यास भएका छन् । नेपालमा प्रायः कम्युनिस्टले भन्ने गरेको समाजवाद, माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हो । त्यो रुस, चीन या उत्तर कोरियाको जस्तो नभई नेपाली विशेषताको आधुनिक समाजवाद हुनेछ ।
समाज विकासको प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा, समाजवाद पुँजीवादकै गर्भबाट जन्मिने भए पनि त्यो पुँजीवादभन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न र साम्यवादतर्पmको संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नेपाली विशेषताको समाजवादमा पनि उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्वसँगै ‘योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम’ भन्ने माक्र्सवादी सारसहित शताब्दीयौँदेखि विश्वका श्रमजीवी जनताले अथक र वीरतापूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका तमाम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अपनाएको समाजवादी–लोकतन्त्र हुनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रविनाको समाजवाद र समाजवादविनाको लोकतन्त्रले नेपाली जनताका समस्याको सही समाधान हुँदैन । समय र परिस्थिति बदलिएसँगै समाजवादको चरित्रमा पनि थप विकास हुँदै जान्छ । यसो नगर्ने हो भने त्यो माक्र्सवादमा आधारित वैज्ञानिक समाजवाद हुन सक्दैन । नेपालका कम्युनिस्टले ल्याउन चाहेको समाजवाद गरिबी बाँड्ने समाजवाद नभई सबै नेपाली जनताको सुख र समृद्धिसँगै सिंगो मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउने समाजवाद हो । त्यो समाजवाद समाज विकासका क्रममा स्वस्फुर्त उत्पन्न हुँदैन ।
माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा कम्युनिस्ट पार्टीको बुद्धिमत्तापूर्ण र योजनाबद्ध प्रयत्न एवम् कुशल नेतृत्व र आमजनताको साथ–सहयोग, समर्थन, सहभागिता र संलग्नतामा मात्र त्यस किसिमको समाजवादको प्राप्ति सम्भव छ । विश्वब्यापी रुपमा जसरि समाजवाद आयो नेपालको सरकार अझ कम्युनिस्ट पार्टीले मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पाठ सिक्दै हामि अघि बढ्नु पर्ने देखियो अन्यथा आगामी निर्वाचनमा नेकपाले धुलो चाट्नेछ ! बितेको चुनाबमा कुनैपनि पार्टीलाई जनताले एमसीसीको म्यान्डेट दिएका हैनन्, सरकार एमसीसीमा जनमत संग्रह गराउन सक्छ कि सक्दैन ? अन्यथा एमसीसी नचाहानेले छुट्टै देश माग्न पाउने कि नपाउने ?
Previous Previous post: फाँसीको सजाय सुनाएपछि किन भाँचिन्छ कलमको निव ?
Next Next post: अर्को खतरनाक भाइरस : डेढ करोड संक्रमित, ८ हजारको मृत्यु